Hordhac faahfaahsan oo silig xardhan oo caadi ah
Xarigga siligga ah ayaa qalooca oo lagu dhejiyaa mashiinka siligga si buuxda otomaatiga u ah. Caadi ahaan waxaa loo yaqaanaa birta birta loo yaqaan, birta siligga leh, silig isku xiran. Noocyada alaabooyinka la dhammeeyay: silig keliya oo la maroojiyo iyo silig laba jibbaaran. Wax ceeriin: tayo sare leh oo kaarboon yar st ...
Hordhaca gabion net
by idaacadda Subaxnimo 20-08-08
Shabakada Gabion waxaa loo isticmaali karaa taageerada jiirada, taageerida salka aasaasiga ah, shabaqa jiingada la taaban karo ee buufin dusha sare, dhirta cagaaran (cagaaran), tareenka iyo xayndaabyada go'doominta waddada weyn, sidoo kale waxaa laga dhigi karaa baqashado iyo dermo saafiya oo loogu talagalay ka hortagga baarista wabiyada biyo xireenno
Mashiinka net-ka ee laba-geesoodka ah oo horay u qaadanaya iyo mabda'a qallooca gadaal
Mashiinka mesh silig ee laba geesoodka ah ayaa loo qaybin karaa laba qaybood, mid waa muruq-dhaqameedka khilaaf soo noqnoqda ee mesh siligga laba geesoodka ah, kan kalena waa nooc cusub oo ah mashiinka meshka siligga laba geesoodka ah ee tooska u wada w ...
Isbarbardhigga silsiladda siligga siligga ah ee mashiinka xayndaabka siligga ah iyo mashiinka siligga siligga siligga siligga ah
1. Shuruudaha xariirta: 1) Mashiinka laba-silig leh wuxuu leeyahay shuruudo aad u adag oo ku saabsan alaabta ceeriin. Isla mar ahaantaana, jilicsanaanta iyo xoogga adag ee labada fiilooyin ee la gelinayo waa inay ahaadaan kuwo iswaafaqsan si loo soo saaro. Marka xoog mid o ...